Michael Essien Oo Magacaabay Labadii Laacib Ee Ugu Adkaa Ee
Halyeygii Chelsea khadka dhexe uga ciyaari jiray ee Michael Essien ayaa shaaciyey magacyada labadii ciyaartoy ee ugu adkaa ee uu ka hor tegay sannadihii uu ka ciyaarayay horyaalka Premier League, kuwaas oo hirdan adag ay garoomada ku dhex-mari jireen isla markaana dagaalkooda iyo loollankoodu joogto ahaa.
Xiddiga hore ee reer Ghana oo lagu tilmaamo mid ka mid ah laacibiintii Afrika ee ugu fiicnaa ee ka ciyaaray horyaalka Premier League, waxa uu Blues joogay sagaal sannadood oo uu koobab badan ku guuleystay.
Michael Essien ayaa sannadkii 2005 uu Jose Mourinho kusoo iibsaday lacag dhamayd £24.4 milyan oo Gini, iyadoo uu saxeexiisana ku garaacay Manchester United oo kula tartamaysay, waxaana xilligaas uu noqday mid ka mid ah ciyaartoyda Afrikaanka ah ee ugu qaalisan taariikhda kubadda cagta.
Laba horyaal oo Premier League ah, Afar FA Cup, League Cup iyo Champions League ayuu Essien la qaaday Chelsea, laakiin waxa aanu marna illoobaynin sidii ay iskula dhibaatoodeen halyeeyadii Manchester United iyo Liverpool ee Steven Gerrard iyo Paul Scholes.
Su’aalo toos ah oo barta bulshada ee Instagram laga weydiinayay, ayaa waxa Esien la su’aalay inuu si daacad ah u sheego ciyaaryahannadii ugu adkaa ee uu ka hor tegay intii uu Premier League joogay, waxaanu yidhi: “Mar walba waxaan odhanayaa wuxuu noo dhexeeyey Steven Gerrard iyo Paul Scholes, haddii aan daacad ahaado.
“Waxay ahaayeen laba ciyaartoy oo adag! Kaliya kumay wanaagsanayn kubadda cagta, laakiin dhab ahaan waxay ku adkaayeen taakallada, aadna way u xoogganaayeen.
“Aad ayay u adkaayeen laakiin waxa kale oo adkaa horyaalka Premier League. Meel kasta oo aad tagto iyo qof walba oo aad ka hor tagtaa wuu adag yahay, waana inaad isku daydo inaad adigu adkaato.”